Mozambika: 2038? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2017 7:41 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, Swahili, English
(Marihina fa tamin'ny 2 Aogositra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tahaka ny ahoana i Mozambika afaka 30 taona? Manolotra ireo tranga “bizantinina” miisa sivy ary manasa ny mpamaky mba hanova azy ireo araka izay hitany fa mety ilay mpandinika ny fiarahamonina Carlos Serra [pt];
1. Ambikambiny sisa no ampiasaina ny teny Portiogey, takon'ny teny Anglisy, ary lasa fiteny tsy fahita firy any amin'ny faritra an-drenivohitra. Ho lasa fitenin'ny manam-pahaizana manokana ny Portiogey, izay ampiasaina any amin'ny tontolon'ny kolontsaina, ary tohanan'ny fiteny malefaka mifangaro ao amin'ny faritra Savannah.
2. Ho tantanan'ny Shinoa, Rosiana, Breziliana ary farany ny Indiana ny harena mineraly. Hanana fitrandrahana shinoa-breziliana ny lohasaha Zambèze.
3. Raha misy ny herijika , dia hisy solitany, miaraka amin'ireo Amerikana sy ny Kanadianina hitrandraka izany.
4. Raha mbola misy ny ala dia ho fananan'i Shina.
5. Lasa ho tany mampiasa famokarana ara-boajanahary izany, izay ho tantanan'ny mpiara-miombon'antoka ara-barotra isankarazany, ho feno ny fambolena majinika miovaova toerana sy mahakivy, miampy ny fanangonam-bokatra manokana sy voaharo tsara ho an'ny fanondranana vokatra ‘céréales’ any Shina sy India.
6. Ny varotra, mpamongady na antsinjarany, dia ho Shinoa-Indiana, toy ny vita Shinoa.
7. Ho lasan'i Eoropa ny morontsiraka fizahantany, miaraka amin'ny Eoro-Amerikanina miakanjo safari mitomany sy mifikitra amin'ny fahatsiarovana an'i Eoropa efa ho faty sy i Amerika tsy imperialista.
8. Eto an-toerana no hamokarana ny finday, miaraka amin'ny fonosana Nokia sy ny fanahin'ny Shinoa, ho Shinoa-Koreana ny fiara, miaraka amin'ny famolavolana Amerikana.
9. Ny minisitera tena mahatalanjona , ny minisitera milay indrindra, dia ny an'ny Raharaham-barotra vahiny (jereo eto ny fahalehibeazany amin'izao fotoana izao ao afovoan-tananan'i Maputo mba hahitana ny ho toetoetrany amin'ny hoavy).